Ụjọ! Akwụkwọ CJ Tudor 3 kacha elu › June 2022
El ụdị egwu Ọ na -abụkarị olulu mmiri maka ndị na -ede ụdị satịlaịtị niile, site n'oge ruo n'oge na -emikpu onwe ha na akụkọ ọkụ mmụọ na ọchịchịrị pụtara n'etiti anyị. Yabụ ikpe dị ka ndị Britain CJ Tudor ma ọ bụ onye america JD Barker (ndebiri dị ka ihe mere na mberede) bụ ihe atụ ndị kwesịrị ịja mma n'agbanyeghị na ha na -achọkwa ihe pụtara egwu mere ka e jiri akwụkwọ ndebanye aha ha mee ihe.
Na ee, na a Stephen King N'ịlaghachi azụ n'echeghị echiche nke o ji aka siri chịa kemgbe ngwụcha narị afọ nke XNUMX iji banye n'echiche efu, dystopias na ihe niile na -esite na otu ihe ịga nke ọma, onye edemede dị ka CJ Tudor mere nke ọma na -emebi ihe egwu nke akparamaagwa. na nnukwu anụ nke ụbọchị anyị.
The paranormal na -abịakwute anyị mgbe niile na akụkụ amabeghị. Akụkụ nke anọ nke nwere ike bụrụ ihe ịma aka nye sayensị na ihe ọmụma n'ihi na ha nwere ike ịbụ nnukwu oghere sara mbara ebe onyinyo nke ihe ọjọọ na -egosipụta onwe ya mgbe niile n'ụwa anyị na -ezo. Ọ bụrụ na Chineke adịghị, a na -ahapụ ihe niile, dịka m ga -ekwu Dostoevsky. Akwụkwọ dị ka nke Tudor na -enye anyị anaghị egosi ma ọ bụ gọnarị ịdị adị nke Chineke, naanị ihe ha na -eme bụ inwe obi abụọ na ọdịnaya ọjọọ niile nwere ike ịchọta ebe ọ ga -esi wee wakpo ụwa anyị n'ikpeazụ.
Top 3 Akwụkwọ akụkọ akwadoro nke CJ Tudor dere
Ụmụ agbọghọ Chapel Croft
Echiche a na-ewu ewu na-abawanye ụba n'ihe gbasara egwu egwu. Ihe niile malitere site n'ọchịchịrị na nchọpụta ọkụ dịka naanị ihe ngwọta iji nwee ike ịhụ ụwa n'ime awa abalị. N'oge gara aga, ọ dị mfe karị ... Ugbu a ihe niile nwere ike ịgba ọchịchịrị ozugbo a na-amanye igwe ahụ, site na ọmarịcha mara mma na ụmụ agbọghọ di na nwunye na-emetụ n'ahụ ..., na-agafe ụdị ụkọchukwu ahụ nke na-ele anyị anya dị ka ụmụaka na-echere. mmehie anyị kacha njọ...
Akụkọ ọjọọ na-akpalite na Chapel Croft. Ihe na-agbakwụnye n'ọtụtụ nde ndị funahụrụ na ndị nwụrụ anwụ bụ nke onye ụkọchukwu parish obodo ahụ, bụ́ onye kwụgburu onwe ya na chọọchị nke ya nanị izu ole na ole gara aga.
Iji dochie ya, Jack Brooks rutere n'obodo. Ọ kpọtaara nwa ya nwanyị dị afọ iri na anọ na akọnuche na-enye nsogbu n'obi, n'agbanyeghị na o nwere olileanya ịmalite ndụ ọhụrụ ebe a. Mana ihe ọ chọtara bụ ebe jupụtara na nzuzo na nzuzo ebe onyinye nnabata dị ịtụnanya na-echere ya: ngwa mkpochapụ na ozi ọjọọ.
Ka ọ na-abanyekwu n'ime obodo ahụ wee mata ndị bi na ya pụrụ iche, ka esemokwu oge ochie, ihe omimi na enyo na-apụta. Ma mgbe nwa ya nwanyị Flo malitere ịhụ mmụọ ụmụ agbọghọ na-ere ọkụ, ọ bịara doo anya na mmụọ nke Chapel Croft jụrụ izu ike n'udo.
Ma ikpughe eziokwu nwere ike igbu mmadụ n’obodo nwere oge gara aga, ebe onye ọ bụla nwere ihe ọ ga-ezobe na ọ nweghị onye tụkwasịrị ndị ọ na-amabughị obi.
N'ọtụtụ oge, anyị na -ahụ nlọghachi akwụkwọ ma ọ bụ sinima gbasara mmụọ, ụlọ ọrụ ndị ahụ na -agagharị n'etiti ụwa anyị na -achọ mkpebi ikpeazụ maka ihe kpatara ha. N'ihi na na -edozighị ụfọdụ azụmaahịa a na -agwụbeghị, mkpụrụ obi agaghị enwe ike ịgbanarị na -awagharị awagharị dị ịtụnanya nke pọgatrị, ebe oyi ebe ọbụnadị ndị mmụọ n'onwe ha ka nwere onwe ha ịdaba na hel ma ọ bụrụ na ha adaa ...
Mgbe ị na -ala n'ụlọ otu abalị, Gabe hụrụ ihu nwa agbọghọ pụtara na windo azụ nke ụgbọ ala ochie ahụ tara nchara n'ihu ya. Naanị kwuo otu okwu: "Papa." Ọ bụ nwa ya nwanyị dị afọ ise, Izzy. Ọ hụghịkwa ya ọzọ.
Afọ atọ ka nke a gasịrị, Gabe na -eji ụbọchị ya na abalị ya na -agbagharị n'okporo ụzọ na -achọ ụgbọ ala nke were nwa ya nwanyị, na -ajụ imebi olileanya n'agbanyeghị na ọtụtụ mmadụ chere na Izzy anwụọla. Fran na nwa ya nwanyị, Alice, agaala ọtụtụ kilomita n'okporo ụzọ awara awara. Ha anaghị achọ. Ha gbalaga. Na -agbalị ịnọ otu nzọ ụkwụ n'ihu ndị chọrọ imerụ ha ahụ. N'ihi na Fran maara eziokwu. Ị ma ihe mere ada Gabe n'ezie. Ị ma onye kpatara ya. Ọ makwa ihe ha ga -eme ha ma ọ bụrụ na ha achụkwudo ha ...
Anyị amatalarị na nwata site na nkọwa bụ oge obi ụtọ. Mana n'ụdị ụfọdụ, ihe dị iche na -amịpụta mkpụrụ kacha mma iji dozie atụmatụ dị mma. Mgbe anyị na -agụ akụkọ na -atọ ọchị ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ na -atụ ụjọ, anyị na -atụ anya isi mgbagwoju anya nke na -eme ka anyị nwee ahụ iru ala, na -akpasu oghere ndị ahụ ebe anyị nwere ike hụ nchekwa, obi ụtọ na uru dị iche iche.
Ihe mgbagwoju anya bụ mmetụta ezi uche dị na ya nke, agbanyeghị, na-ewepụ anyị na atụmatụ anyị. Ihe niile na-amalite site n'iji nwayọọ na-agụ banyere ụmụaka ndị na-adịghị agwụ agwụ, ndị na-enweghị izu ike, ma emesịa tụgharịa akụkọ ahụ ihu. Mgbe ọ dị afọ iri na abụọ, Eddie na-ekere òkè n'ụwa echiche okike ya, na-ejupụta n'echiche dị mma na nke ọjọọ nke ya na ndị enyi ya na-akpakọrịta (The paradigmatic case of It from his own Stephen King)
Nsogbu bụ mgbe otu n'ime echiche ọjọọ ndị ahụ na -eme ka ha bịaruo nso oghere nke echiche na -emecha banye na ọwa nke ihe ọjọọ, nke na -enwe echiche gbasara ara, nrọ kachasị na njedebe na -enweghị mgbagha.
Nwoke nzu bụ agwa dị n'akụkụ nke ọzọ nke enyo nwata, onye gbara ọchịchịrị nke na -achọ ụmụaka ụfọdụ ịtụgharị uche nke ukwuu wee mechaa banye n'echiche ha na -esite n'akụkụ gbara ọchịchịrị. Na Eddie bụ ọwa mgbasa ozi ya n'ihi otu ihe merenụ ...
Eddie wee nweta otu ụzọ nkwukọrịta, na -ewebata ndị enyi ya n'egwuregwu na -atọ ụtọ nke ha jisiri ike see na ụwa ahụ ewezuga ụmụaka. Mana ọwa nkwukọrịta na -ejedebe na onye Chalk Man, onye ekele maka ha ga -ewepụta atụmatụ ọjọọ iji malite onwe ya n'ọrụ nke ọtụtụ mkpụrụ obi.
Ahụ nke onye mbụ tara ahụhụ, nwa agbọghọ dara ogbenye, ga -achọpụta ụwa ọjọọ nke Eddie na ndị enyi ya batara. Ma eleghị anya, ọ bụ akaha. Ihe ọjọọ ahụ nwere ike ịtụgharị onwe ya n'ime ọtụtụ afọ ga -achọpụta ndụ ha ...
Akwụkwọ ndị ọzọ akwadoro nke CJ Tudor…
Ọnwụ nke Annie Thorne
Olu yiri ka ọ dị nwayọ, nke Joe Thorne, na -ezitere anyị site na nchekwa dị nchebe mbụ, akụkọ banyere mwepu nke nwanne ya nwanyị Annie. Ụnyaahụ na taa na -alaghachi na eriri rọba oge nke yiri ka ajọ onye ahụ jikọtara na ihe ọjọọ na -achị ihe niile, n'oge gara aga, ugbu a na ọdịnihu, belụsọ ma eriri mechara gbajie.
Igodo ahụ, ebe enwere ike ebipụ ihe na -emenye ụjọ nke egwu dị na Arnhill. Naanị Arnhill na -abụ ebe uzuzu ụnyaahụ kpuchiri, dị ka ncheta kacha njọ nke ndụ anyị, dịka oge nhụjuanya kacha njọ.
Joe na -eche. Ọ maghị ma o ziri ezi ịlaghachi wee kọwaara anyị nke ọma. Otu ihe dị n'ime ya na -akpali ya ịgbapụ ọzọ, dịka mgbe ọ dị afọ iri na ise na nwanne ya nwanyị nke obere si na omimi nke mkpụrụ obi ya tọrọ atọ n'ime ụbọchị abụọ nke ọ na -efu efu.
Mana onye ọ bụla na -achị ndò, egwu na ara na -ama na ọ ga -ewe ntakịrị ihe na eriri ka Joe nwee ike izute ya ọzọ na ọgụ na -ezighi ezi. Maka na mkpọchi amụrụ site n'egwu, enweghị ike inwe onye mmegide, naanị ịnwe mkpụrụ obi dịka mmezu ikpeazụ nke ọrụ nzuzu.
Mana ọ nweghị ihe dị mma iji hụ na Joe ga -alaghachi na Arnhill karịa icheta ikpe ọmụma. N'ihi na ọ na -ama mgbe niile na ọ bụrụ na ọ garaghị ebe a na -egwupụta ihe ochie, na ọ nweghị ihe gaara eme. Annie agaraghị anọ n'ọnọdụ ahụ jọrọ njọ ma ọ gaghị enyefe ụbọchị ya n'ọchịchịrị n'okpuru ihe ndina ya.
N'ezie, akụkọ ahụ na -agawanye n'ihu n'ike n'ike. Mana ọ bụkwa eziokwu na mpụta ozi nke na -ehota Joe n'ahịrị na ihe gara aga ya bụ echiche siri ike na ọ bụ nko zuru ezu iji gaa n'ihu na -erichapụ ibe anyị ka anyị na -abanye na veranda nke m, ihe atụ zuru oke nke ụzọ na -aga nyocha. nke oke ụjọ nke na -echebe Joe.
Ihe karịrị ike mmụọ nsọ na-ejedebe ntakịrị ntakịrị, na-enweghị mmasị nke ihe a sị na ọ bụ ọrụ egwu dị mfe. Nkọwa ndị gbara Arnhill gburugburu ezuola imetụ eriri ahụ na -enyo enyo, nke na -egbochi gị ịhapụ ịgụ ihe.
Ọ na -emekwa ọzọ ... Akụkụ nke abụọ nke email ahụ bụ nke na -eweta esemokwu na -ekpuchi ihe niile. Joe bụ nwa ọzọ na -echegbu onwe ya maka nwanne ya nwanyị, na -amaghị ihe na -echere ya, nwanne ya nwanyị, ndị enyi ya niile n'oge gara aga na onye ọ bụla ọzọ si n'obodo ahụ bụrụlarị ọnụ n'ihi mmụọ ime mmụọ nke ụfọdụ ụmụaka dara ogbenye.
Tags CJ Tudor, Akwụkwọ akụkọ egwu